Gọọmentị India chọrọ ka ndị mba ọzọ si mba ọzọ na-achọ ịbanye na India, nyefee Visa Visa Indian. Enwere ike ime usoro ntinye akwụkwọ a site na nleta anya na ụlọ ọrụ nnọchite anya India ma ọ bụ site na ịmecha ya Ngwa Visa India na ntanetị na weebụsaịtị a.
Ndị njem na India na-abịa n'okpuru otu Describeddị Visa akọwapụtara ebe a Ikwesiri iji mezue Visa Ngwa India.
Shouldkwesịrị mezue Ngwa Visa Indian ọ dịkarịa ala ụbọchị anọ ịbanye na India. Visa maka India nwere ike iwe ụbọchị atọ ruo anọ maka nnabata, yabụ ọ dị mma itinye ụbọchị azụmahịa 4 tupu ịbanye India.
Ngwa Visa India na-ewe nkeji 3-5 iji mezue tupu ịkwụ ụgwọ ịntanetị. Mgbe ụgwọ ahụ zuru, dabere na mba nke onye na-achọ akwụkwọ na ebumnuche nke Nleta ahụ, enwere ike ịrịọ onye na-arịọ arịrịọ maka ozi ndị ọzọ.
Emejuputara ozi ndi ozo na nkeji ato. Ọ bụrụ n ’okwu ọ bụla dị na imeju akwụkwọ ntanetị, ị nwere ike ịkpọtụrụ Enyemaka Desk na otu ndị ahịa na-akwado ndị ahịa na weebụsaịtị a site na iji Kpọtụrụ Anyị njikọ.
Must ga-abụrịrị otu n'ime mba tozuru etozu nke Gọọmentị India na-anabata eVisa India tozuru oke.
Ihe ọzọ ịchọrọ iji mejupụta Ngwa Visa India na ntanetị na-abịa maka otu ebumnuche ndị a:
Paspọtụ nke nwere peji mpe abụọ, ka onye ọrụ ndị na-ahụ maka mbata na ọpụpụ nwere ike stampụ na ọdụ ụgbọ elu. Mara, na Visa India nyefere mgbe emejuputara Visa India na ntanetị anaghị achọ ka ị gaa n'ụlọ ọrụ ndị nnọchianya India maka ịkọwasị stampụ Visa. Achọrọ akwụkwọ ibe abụọ n'ọdụ ụgbọ elu maka ntinye na stampụ ọpụpụ na paspọtụ gị.
Enweghị ọdịiche dị n'etiti ụzọ abụọ ahụ belụsọ ole na ole obere ọdịiche.
Ọ bụrụ na ebumnuche njem gị abụghị nke ndị dị n'elu, ịkwesịrị ịde akwụkwọ maka akwụkwọ, Ngwa Visa Indian nke na-ewu ewu nke ga-agbatị karịa ma dị ogologo.
Visa Indian nke a ga-enyefe gị mgbe ịmechara Ngwa Visa India Online ma ọ bụ ngwa eVisa India bụ naanị maka ọhụụ atọ maka nzube ndị njem, ụbọchị 30, afọ 1 na afọ 5.
Visa ahụike enwetara site na Indian Visa Application Online ma ọ bụ eVisa India dị ụbọchị iri isii maka nzube ahụike. Ọ na-enye ohere ntinye atọ na India.